Iimpepha zeGoogle - Yongeza kwi-Maths
Kubasebenzisi abasebenzise amandla yamaphepha e-Google kunye nezixhobo eziphathekayo ezinokuzongezwa kumava womsebenzisi, nantsi ezinye zezixhobo zamatriki onokuzifumana luncedo kakhulu.
Kukulungele ukuba nebalawuli ekuqondeni kula maxesha xa ufuna ukwenza imisebenzi elula phakathi koxwebhu. Akukho mfuneko yokuhlawula phakathi kweefestile okanye ukuvula ispredishithi sale nto; fakela i-calculator kwenye yezinye ezininzi ukhetha i-app Calculator kwi-Add Calculator kwimenyu.
Ichanekile kwaye ilungile - oku kusebenza!
Yongeza le ndlu yamandla kwinqanaba lomgca loxwebhu kwaye unokuthayipha ifomula eziyinkimbinkimbi zokufakela ngokukhululeka okumangalisayo. Ukucaphula incedisi: "" Iifomula zingadalwa okanye zisetyenziswe ibhokisi lokufaka imathematika okanye ngokuthayipha ukumela kwabo kwiLaTeX. Isiphumo senziwa ngoko mfanekiso kwaye sifakwe kwixwebhu lakho. "
Ukuba uye wazama ukudala ifomula kunye nefomathi yazo ecacileyo kwirekhodi yombhalo, uya kuqonda isixhobo esinje.
I-Graphing Calculator Yongeza-On (njenge-Whizkids CAS)
Sombulula i-equation kunye negrafu zesalathisi.
Fumana isisombululo seenombolo kunye nezichanekileyo.
Yenza lula kunye neenkcazo zezinto eziguqukayo.
Draganisa uphinde ubeke iziphumo kunye negrafu ukusuka kwibarbar e-Google Amadokhumenti.
Eyona nto ibhetele, yenza oko ithethayo kunokuyenza!
Ukuba ufuna iFomadratic formula, esi sixhobo sokusebenzisa. Ukulinganisa ama-Complex, abalingiswa besiko kunye neempawu zejometri zingasetyenziswa.
Unokudibanisa namatafula eedatha asele ekhompyutheni. Ngisho neNtetho yeMathematika kwi-Chrome ingafumaneka ukudala amagama.
Ngamanye amaxesha konke okufunayo kukukwazi ukwenza imiba yezibalo kwiilwimi ezifanelekileyo kunye nefomathi. I-MathType iyakwazi ukuphatha ngokukhawuleza nangokukhawuleza. Esi sixhobo singasetyenziselwa kwi-Google Sheets app ukwenzela ukuba uguquke kwiinto zakho.
Njengoko iGoogle kunye nezicelo zeGoogle ziyaqhubeka zifumana ukwamkelwa kwimibuthano yomsebenzisi, kuya kufika okunye okuninzi kunye nokusebenza okubalulekileyo kwezibalo. Musa ukuhlala ngaphantsi kwezinto ozifunayo. Jonga ngeenxa zonke, njengoko izisombululo ezintsha ziza imihla ngemihla
Ukwakha i-Basic Stage Makeup Kit
Isikhokelo seNyathelo-Ngenyathelo kwi-Tre Flip epheleleyo kwi-Skateboard
Amagama Amagama aseSpanish - iZiselo kunye neMvelaphi
Yintoni iParameter eyiyo?
U-Alice Paul, I-Women's Suffrage Actist
Yiyiphi iQumrhu eliManyeneyo?